Ny tranofiara voalohany an'ny miniseries Lisey's Story dia misy | Avy amin'ny mac aho
Rehefa misy latsaky ny 3 herinandro sisa tavela Apple premieres ny miniseries Tantaran'i Lisey, avy amin'ny Cupertino dia navoakan'izy ireo tao amin'ny fantsona YouTube ny tranofiara voalohany tamin'ity andiany ity, andiany izay hisy fizarana 8, an'i Julianne Moore sy Clive Owen ary miorina amin'ny novelon'i Stephen King.
Ny fampifanarahana ny tantara an-tsoratra, nosoratana tamin'ny 2006, dia nihazakazaka avy amin'i King mihitsy, izay no antony, araka ny nambarany volana vitsivitsy lasa izay, dia niezaka izy nitondra ny lafin-javatra rehetra tamin'ny novelaviny teo amin'ny efijery. Eo am-piandrasana ny 4 Jona, ny daty hanombohana azy voalohany, afaka mijery ilay tranofiara isika mba hahitantsika ny hevitr'ity andiana horohoro ity.
Ao amin'ny famaritana ny horonantsary dia asehon'i Apple amintsika ny tohan-kevitra momba izay ho hitantsika amin'ity andiany ity:
Miorina amin'ny fivarotana an'i Stephen King, ary izy ihany no nanamboatra ny tenany, ny "Lisey's Story" dia mampihetsi-po tanteraka izay manaraka an'i Lisey Landon (mpandresy an'i Oscar Julianne Moore) roa taona taorian'ny fahafatesan'ny vadiny. Ilay mpanoratra tantara malaza Scott Landon (voatendry Oscar Clive Owen). Andiana hetsika tsy milamina izay mahatonga an'i Lisey hiatrika fahatsiarovana ny fanambadiany tamin'i Scott izay niniany nosakanana tsy ho ao an-tsainy.
Miaraka amin'i Clive Owen sy Julianne Moore, hitantsika ilay mpilalao sarimihetsika Dane dehann. Ilay tompon'andraikitra tamin'ny fitantanana ireo andiany, dia ilay Chilean Pablo Larraín raha toa ka i JJ Abrams no tompon'andraikitra amin'ny famokarana.
Stephen King dia nanambara tao anaty tafatafa iray fa noho ny fiparitahan'ny serivisy fandefasana horonantsary dia misy fahalalahana betsaka hanao karazana fampifanarahana, noho izany dia mety tsy ny lohateny voalohany na farany an'ity mpanoratra ity no ho hitantsika tsy ho ela eo amin'ny efijery kely, na amin'ny Apple TV + na amin'ny sehatra hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ny tranofiara voalohany an'ny miniseries Lisey's Story dia misy izao
Maherin'ny 60% amin'ireo mpampiasa Apple no liana amin'ny fividianana AirTags
24 "iMac miaraka amin'ny processeur M1 dia miova ho" Shipped "